Apple eMac na Microsoft XBox? | Martech Zone
Apple eMac na Microsoft XBox?
Wenezde, August 8, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ dị ka ụbọchị dabara adaba maka nke a ime. N'ụbọchị Apple wepụtara iMac - kọmputa mara mma, enyi nke ezinụlọ nyere anyị ọ bụ nwanne nwanne okenye, eMac. EMac bụ n'ezie CRT mbipute nke iMac. Ọ dị ka ihe esi na ya pụta 2001 Oghere Odyssey - Echere m na ọ bụ ihe mpempe nkà karịa kọmputa.
Ọ bụ ezigbo obere kọmputa (nnukwu) kọmputa, ọ bụ ezie! Ọ masịrị m. Anyị ga-emezi ya na 512Mb nke RAM wee chọta ebe iji gosipụta ya n'ime ụlọ. Homelọ m na-aghọ ngwa ngwa ihe ngosi nka Apple - yana AppleTV, di na nwunye nke iPod Shuffles, G3, G4, eMac na MacBookPro. Yikes. (G3 na G4 anaghị ebili ma na-agba ọsọ).
Otu ihe na-efu na eMac bụ ikike ị gbakwunye Kaadị Nweta Ikuku. Apple rere AirPorts n'oge ahụ ma ị nwere ike ijikọ na ndị ahụ site na Ethernet Cable. Ha ka nwere AirPorts ugbu a, mana na ezi Mountain Dew spirit - ha bụ AirPort Extremes - na-agba 802.11g kachasị ọhụrụ. Enweela m nnukwu netwọị Netgear ikuku nke na achọghị m ịkwalite.
Ihe a ga-eme!? Kedu otu onye na-enweghị AirPort ga-esi nweta anụ ọhịa a na ịntanetị? Nwa m nwoke jiri amamihe zaa ajụjụ ahụ. Ọ gara ma nweta XBox Ikuku unit na anyị na-adịghị eji na-wired ya… Voila! Ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ akwa ikuku ikuku maka XBox iji jikọọ na netwọk - otu ihe ahụ anyị na-anwa ime na eMac.
Ọ na-arụ ọrụ! Nke a bụ a foto nke anyị na-enuga na nkiri site na akwa XBox wireless ethernet.
Mba, anyị agaghị edebe ihe n’ụzọ dị otu a. Gwakọta Mac na Microsoft na-adị m ka ihe ruru unyi (ọ bụ ezie na m na-eme ya ọtụtụ!). Ezigbo enyi m, Bill, nwere akwa Linksys WET11 wireless ethernet Bridge nke m ahazi wee bilie n'abalị a. The XBox wireless unit na-alaghachi ya ziri ezi nwe… XBox.
Aga m achọ ụlọ ihe nkesa na-adịghị anya.
Lee echiche nzuzu! Obi ụtọ na ọ na-arụ ọrụ 🙂